Imithombo yeendaba yeApple: uMyili osisiSetyenziso seMfono | Martech Zone
Cinezela usetyenziso yaphuhliswa ukuvala umsantsa wolwazi phakathi kwabaqulunqi bemizobo kunye nabaphuhlisi. Njengoyilo, umseki uGrant Glas wayefuna ukwakha usetyenziso lweekhowudi simahla. Njengomphuhlisi, uKevin Smith wabhala isisombululo. Benze ii -apps ezingama-32 zisebenzisa inguqulelo yokuqala yeApp App kwaye ukusukela oko, 3,000+ abasebenzisi benze iiapps kwiqonga labo.
I-App Press yenzelwe ukuba ijongeke njenge-Photoshop kunye nokusebenza njenge-Keynote. Oku kuvumela nawuphi na umyili ukuba angene kwaye aqale ukwakha kwangoko. Asikho esinye isixhobo sokwenza usetyenziso esijongeka njenge-App Press.
Izixhobo zeendaba zoSetyenziso
Umhleli weSakhelo -Qala ukwenza iapps yakho ngaphakathi kwemizuzu usebenzisa umhleli wobeko. I-App Press iqala njengengubo engenanto kwaye ivumela umyili ukuba enze amaphepha asebenzise umxholo wokubeka. Layisha umaleko kumaphepha emva koko wabele ngokukodwa ukusebenza okuchukumisiweyo. Qhagamshela kwamanye amaphepha kwi-app yakho okanye kwiiwebhusayithi zangaphandle ngokusebenzisa ii-hotspot layers; yenza ulungelelwaniso lomgama okanye olungekho emgceni. App Press isekwe kwiwebhu kwaye ayifuni kufakwa kwesoftware. Ayinamsebenzi ukuba ukwiMac okanye kwiPC, ekhaya okanye emsebenzini, ungafikelela kuyilo lwakho naphina, nangaliphi na ixesha.
Ithala leencwadi leasethi -Faka zonke izendlalelo zeapps yakho kwilayibrari yeasethi. Ngendlela ekhawulezayo nelula, qhagamshela iakhawunti yakho yeDropbox kwaye ususe inkqubo yokulayisha iyonke. Iqela lethu labaqulunqi likwadibanisa izinto ezininzi zasimahla. Ezi asethi zibandakanya amaqhosha, imvelaphi, iintloko kunye neenyawo ezinokuthi zisetyenziswe nangubani na kwi-app yazo. Iakhawunti yeSiseko yeApp Press iqala nge-100 MB yendawo kwilayibrari yakho kwaye iakhawunti yePro ine-500 MB.
Qalisa ukuyila ngoku Inkqubo yokuyila yokuqhela iqhelekile kuye nawuphi na umyili. Ukusukela oko i-Photoshop 3.0 yaqaliswa ngo-1994, ukubekwa kwaba yindlela ethembekileyo yomyili ngamnye. Ukuphumeza loo mbono kwi-App Press kuvumela nokuba umyili omncinci ukuba enze iiapps ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Khetha umaleko kwilayibrari yakho yeasethi uze uyibeke kwindawo yokuhombisa engenanto. Inkqubo yoyilo ilula, ilula kwaye icocekile.
Yenza iiCandelo kunye namaPhepha -Isixhobo esenziwe kwiApp Press cinezela ukubamba kunye nokujonga kwesiqwengana sokuprinta ngelixa ubhalwe ngomgaqo wokuhamba wewebhusayithi. Yakha amacandelo okwenza ukhangelo olungahambelaniyo nomgama oludityaniswe kunye ngeendawo zeendawo okanye ukwakha umkhondo wokuhamba okuhamba ngokuhamba njengemagazini. Yenza amava ngokungafaniyo nayiphi na enye App App.
Iindawo ekulula kuzo ukuba zilula -Kongeza ngokukhawuleza ukuhamba ngokuhamba kunye nokusebenza kwi-app yakho eneendawo ezineendawo zokuhlala. Zintathu iindidi zeendawo ezitshintshatshintshayo kwi-App Press ezikuvumela ukuba udibanise amaphepha akho kunye, unyuse umxholo wewebhu okanye udibanise ukwabelana ngeTwitter kunye nokwabelana ngeFacebook.
I-App Press iye yavelisa eyabo Imboniso yeApp. Insiza ikuvumela ukuba ujonge kwangoko usetyenziso lwakho kuso nasiphi na isixhobo. Le app yasimahla iyafumaneka kwiVenkile ye App, uGoogle Play kunye neapp yewebhu. Yifake kwi-iPhone yakho, i-iPad, iPod Touch, ifowuni ene-Android kunye / okanye ithebhulethi ukujonga kwangaphambili naluphi na utshintsho olwenzayo.
Ungajonga ezinye zezicelo esele zenziwe kwi-App Press kwindawo yazo.
tags: usetyenziso lwe-androidapp cinezelausetyenzisoipad usetyenzisoIphone appusetyenziso lweselulaUyilo losetyenziso lweselfowuniusetyenziso lwepilisi
Intle. App Press liqonga elilungileyo labayili kunye nabaphuhlisi. Idibanisa umsantsa kufutshane.